Fadeexado isku mid ah oo qabsaday labo madaxweyne Maraykanka ah oo kala xili ahaa - BBC News Somali
Fadeexado isku mid ah oo qabsaday labo madaxweyne Maraykanka ah oo kala xili ahaa
Image caption Donald Trump iyo Bill Clinton
Sanadihii 1990-naadkii madaxweynihii Maraykanka Bill Clinton ayaa waxaa qabsaday fadeexad adduunyada oo dhan laga wada ogaaday oo ku saabsanayd gabadh ka shaqaynaysay Aqalka Cad , Monica Lewinsky , oo ay isweeydaarteen, waxaana xilligaas lasoo jeediyay in xilka laga qaado.
Fadeexad tii oo kale ah ayaa hadda haysata madaxweyne Donald Trump, kadib markii dumarka jirkooda ka ganacsada oo lagu magacaabo Stormy Daniels ay sheegtay in uu la seexday.
Trump waa uu beeiniyay in uu la seexday Stormy sanadkii 2006-dii, balse waxaa jira waxyaabo badan oo labada dhacdo ay iskaga mid yihiin.
Waxyaabaha ay labada madaxweyne sheegeen
Image caption Monica Lewinsky oo la kulmaysa Bill Clinton xaflad ka dhacday Aqalka Cad sanadkii 1996-dii
"Wax xiriir galmo ah nama uusan dhex marin haweeynaydaas" ayaa ka mid ah hadaladii ugu caansanaa ee laga soo xigtay madaxweyne Bill Clinton sanadkii 1998-dii.
Kaliya ma aysan ahayn arrin lala yaabo, balse sidoo kale waxa ay ahayd arrin aanan run ahayn.
Mar dambe ayaa la caddeeyay in madaxweynaha uu xiriir la sameeyay Monica oo ahayd haweenay 20 jir ah oo waayo-aragnimo shaqo u joogtay Aqalka Cad. Gabadh saaxiibo la ahayd Monica oo lagu magacaabo Linda Trip ayaa codad sir ah ka duubtay, kuwaas oo ay ku qiratay in ay wada seexdeen Clinton.
Clinton iyo Monica ayaa labaduba beeniyay in ay wax xiriir ah yeesheen, waxna ay dhexmareen.
Maadaamaa Clinton uu ku dhaartay been, ayaa waxa ay taas keentay in lagu soo oogo dacwado la xiriira in xilka laga qaado.
2014-kii ayay Monica sheegtay wax kasta
Trump iyo Stormy
Stormy Daniels waxa ay sheegtay in ay la seexatay Trump sanadkii 2006-dii, muddo ka hor intii uusan madaxweynenimada isu sharixin, xilligaas oo daadihiye ka ahaa barnaamijka taleefishinka ka baxa ee The Apprentice.
Balse Trump ayaa beeniyay waxa dhacay, oo la sheegay in ay arrinta dhacday xilli xaaskiisa Melania ay uur ahayd wiilkooda.
Balse dhibka jira ayaa ah in Trump uu gabadhan siiyay $130,000 maalmo ka hor ololihii doorashada si ay u aamusto.
Waxaa lacagta bixiyay abukaataha Trump Michael Cohen , waxaana jiray hadalo is burinaya oo kasoo kala baxay labada nin.
Stormy ayaa xaalka uga sii dartay kadib markii ay furatay gal dacwadeed ay ku eedeyneyso Trump.
Trump ayaa dhankiisa dacwad kale ku oogay Stormy oo uu kaga doonayo $20 milyan oo sumcad dil ah.
Trump madaxweyne ma uusan ahayn marka uu falka dhacayay, balse markii uu lacagta bixinayay waxaa socday hawshii ololaha, halkaasna waa meesha sharci ahaan ay dhibka ka leedahay.
Haddii lacagta laga bixiyay lacagtii ololaha doorashada loogu talogalay, taas waxa ay ka dhigantahay in la hareer maray shuruucda heer federaal, taas oo ah dambi weyn.
Balse runta ayaa waxa ay tahay in haddii madaxweynaha uu sameeyo gogol dhaaf aanan taas loo cuskan karin in xilka laga qaado.
Balse arrinta Clinton, dadka waxa ay ku doodayeen in haddii uu madaxweynaha been ku dhaaran karo, in waxyaabo kalena uu been ka sheegi karo.
Dadka Trump dhaleeceeya waxa ay sheegayaan in meesha uu ku jiro qodob ku saabsan kalsoonida lagu qabi karo madaxweynaha, waxay ku doodayaan in haddii madaxweynaha uu lacag intaas la'eg bixin karo, ay ka dhigantahay in madaxweynaha uu yaqaano dhaqanka rakaatada, ayna jiri karaan dad ajaaniib ah oo dhaqankaas uu kala dhaxeeyo.
Arrinka Clinton, fadeexada galmada waa tan illaa iyo maanta laga xusuusto xilligii uu madaxweynaha ahaa, hase yeeshee Trump waxaa jira waxyaabo badan oo kale oo lagu xusuusan doono madaxtinimadiisa.
Waase xilli hore in hadda lasii odoroso halka ay ku dhammaan doonto fadeexada Trump iyo Stormy.
Image caption Monica Lewinsky ayaa hadda ka mid ah tifaftirayaasha Majaladda Vanity Fair
Monica Lewinsky ayaa sheegtay in ay tahay "qofkii koowaad oo waji gabaxa ku dhacay uu dabada ka riixayay ama dhiirogalinayay Internetka".
Sheekadan ayaa waxaa markii ugu horeysay qarxiyay bogga Drudge Report, xilligaas oo ay aad u yaraayeen dadka internetka wararka ka daalacda.
Wariyaha lagu magacaabo Michael Isikoff oo ka tirsanaa majaladda Newsweek ayaa ugu hor ogaaday sheekada, balse tifaftirayaashiisa ayaa dib u dhigay daabacaaddda, balse waxa uu xusuustaa in majaladda ay si halhaleel ah ugu qortay boggeeda markii ay sheekada soo shaac baxday.
Balse wixii dhacay markaas kadib ayaa ahaa wax aad loola fajaco, taariikhdana galay, iyada oo warka uu u faafay sidii dab kayn galay oo kale.
Ka sokoor fadeexada ku dhacday, waxa ay Monica wajahday 27 sano oo xarig ah maadaamaa ay been ku dhaaratay, iyada oo xitaa hooyadeed loogu goodiyay in la xiri doono. Muddo 10 sano ayay iska qarinaysay dadka, nolosheedana si gaar ah u maareyn jirtay.
Sanadkii 2014-tii ayay qortay maqaal dheer oo ay kaga sheekeysay wixii dhacay.
Image caption Stormy Daniels
Waxaase ka duwan Stormy Daniels oo aanan ka qajilaynin fadeexadda, muddo dheerna kusoo dhex jirtay ganacsiga jirka.
Xitaa dadka kusoo weerara baraha bulshada, markiiba waa ay u jawaabtaa, waana ay iska dhicisaa.
Magaceeda rasmiga ah waa Stephanie Clifford, waxayna dalka oo dhan ka bilowday olole ay ku maadsanayso Trump, iyada oo xitaa kasoo muuqatay barnaamijyo majaajilo ah, balse lagu durayo madaxweynaha oo taleefishinada laga baahiyay.
Dadka naqdiya ayaa ku eedeeyay in ay doonayso in ay horumariso xirfadeeda (ka ganacsiga jirka), iyaga oo sheegay in mar horeba ay heer ka gaartay.
Image caption Monica Lewinsky oo warbaahinta lagala baxsanayo sanadkii 1999-kii
Clinton waa uu ka badbaaday in xilka laga qaado, inkasta oo xildhibaanada Aqalka Congress-ka ay u codeeyeen in xilka laga qaado, haddane kuwa Aqalka Sare ayaa laalay go'aankaas, go'aamiyayna in uu waqtigiisa dhamaysto.
Balse waxa is badalay ayaa ahaa in maxkamad ay xukuntay in madaxweyne Maraykan ah uusan haysanin xasaanid ka hor istaagayso in dacwad lagu soo oogi karo. Taasna waa qodobka hadda loo cuskanayo Trump.